ကလေးသူငယ်တွေကို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိအောင် ဘာကြောင့်သင်ကြားပေးသင့်သလဲ? – BurmeseHearts
မိမိရဲ့ ကလေးကိုးအကောင်းမြင်စိတ်ကလေးနဲ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းစွာ မနေစေချင်ဘူးလား။ အကောင်းမြင်စိတ်ကလေးက သူတို့ကို ဘာမှမရှိတဲ့ အခြေအနေမှာတောင် ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားစေတယ်လေ။ သူတို့အလိုချင်ဆုံး အရာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် အကောင်းမြင်စိတ်ကလေး အခြေခံထားတော့ သဘာဝကပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေကိုခံစားရင်း စိတ်ဖြေသိမ့်နိုင်ကြတယ်လေ။
သုံးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို ဆိုဆုံးမတာ မှားသွားခဲ့လို့ ပြန်ချင်ရင် ရမလား?
BurmeseHearts	 Dec 5, 2015 0